Munyori? 7 Dzine Simba Nzira dzeKuti Ita Bhuku Rako ReInternet Bestseller | Martech Zone
Pasina mubvunzo, kana iwe uri anoshuvira munyori uye pane imwe nguva yebasa rako unofanirwa kunge wakabvunza iwo mubvunzo, Maitiro ekuita bhuku rangu mutengesi. kune muparidzi kana chero munyori anotengesa zvakanyanya. Rudyi? Zvakanaka, kuve munyori, kana iwe uchida kutengesa mabhuku ako kune anonyanya kugona nhamba yevaverengi uye kuti unokosheswa navo saka zvine musoro zvachose! Zviri pachena kuti kutendeuka kwakadai pabasa rako kunoita kuti iwe uvake mukurumbira wako zvisati zvamboitika.
Nekudaro, kana iwe uchida kuti izwi rako rinzwike saka unofanirwa kutora matanho anoshanda uye akasarudzika. Iwe haugone kushandura inoverengeka kuita bestseller kana isina kunyorwa zvakanaka. Asi, kunze kwekungotarisa chokwadi chekunyora mune yakakura dhizaini, iwe unofanirwa kutora hanya nezvimwe zvezvinhu chaizvo kuti uite rako bhuku mutengesi.
Unoda kuziva zvakavanzika zvekudaro? Zvino, heino nzira nhanhatu dzaungagone kuita kuti bhuku rako rive hurukuro hombe yeguta. Ingoverenga kumberi uye ndinotenda zvechokwadi kuti matipi aya anokushandira!
Enda kune chimwe chinhu chaunotenda - Kana iwe uri kutakura zano muuropi hwako kuti musoro unenge uchikwezva zvakakwana kune ruzhinji ungaite kuti bhuku rako rive rakanyanya kutengesa saka unenge wakanganisa zvachose. Pane kudaro, nyora pamisoro yakadaro yaunowana inonakidza uye uchida kuverenga nezvayo zvakafanana. Sezvo Carol Shields akataura nenzira kwayo, 'Nyora bhuku raunoda kuverenga, iro rausingakwanise kuwana'. Nekudaro, kunyangwe uchinyora bhuku risingafadzi mune yakasarudzika manyorerwo kana iwe ukanyora nyaya yakakukoshera saka pane mukana mukuru wekuti ive yekutengesa zvakanyanya.
Sarudza iyo chaiyo tema - Chimwe chezvinhu zvakanakisa chingaregedza novel kuti ibude pachena kune mamwe ndiwo dingindira. Vaverengi vako vanokurudzira bhuku rako kune vamwe chete kana ivo vachigona kuenderana zvakafanana. Zvakare, ivo vanonongedzera bhuku kune mumwe munhu kana ivo vaona kuti bhuku racho riri kuendesa meseji iyo vamwe vanofanirwa kuverenga. Nekudaro, iwe unofanirwa kuisa mari yako yakakosha nguva nesimba kuti uwane dingindira rakakodzera renhau yako.
Regai toni isarerekera - Kana chirevo chako chiri chekuita kuti bhuku rako rizivikanwe pasirese saka unofanirwa kunyora nenzira inogona kubatana kune vese vaverengi. Asi, mirira! Neichi chirevo changu, handisi kureva kuti nyaya yako inofanira kunge yakavakirwa patsika dzepasi rose chete. Iwe unogona chaizvo kunyora nyaya nezve chimwe chinhu chiri padyo nemoyo wako, senyika yako, tsika kana chero chii! Ingova nechokwadi chekuti nhaurirano, rondedzero, maitiro ekunyora nezvimwe zvinonzwisisika nevateereri varipo kutenderera pasirese. Unoyeuka here iyo Mubhuku Wemubhadharo Wahwina wa2015- Nhoroondo Pfupi Yekuuraya Kunomwe? Zvakanaka, ndiri kutaura nezve yakadaro mhando toni.
Gadzira yako 'Bhuku Rekuvhara' zvakasarudzika - Isu tinogona kunge takatenda mune chirevo chakadai 'Usatonge bhuku nebutiro rayo' kwemakore. Asi, zvirinani, chitarisiko chekunze chebhuku kazhinji chinoburitsa nyaya yese nenzira yakapfava iyo yakanyorwa mukati. Nekudaro, kupa bhuku rako imwe yerudzi kutarisa rinotarisira kuve chinhu chakakosha. Asi, usafunge kuti iwe unofanirwa kuburitsa mari hombe kuti uite izvi! Zvese zvaunoda mugadziri wekugadzira uyo ane hunyanzvi mukuita kuti pfungwa dzirarame maererano neyakavanzika bhuku rekuvhara.
Sarudza muparidzi akakwana - Zvakanaka, kana zvasvika pakushandura bhuku kuti rive rakanyanya kutengesa ipapo muparidzi anotamba rimwe remabasa 'Akanyanya Kukosha'. Iko kuvimbika kwechiratidzo kwemuparidzi wauri kusarudzira kunogona kukanganisa kuvimbika kwebhuku rako munzira huru. Nekudaro, usakanganwa kusarudza akadaro muparidzi uyo anogona kurega iyo grafu yekutengesa kwebhuku rako kuenda kumusoro !!
Gadzira peji remunyori uye bhuku rebhuku mu 'Goodreads' - Kana zvasvika kune vanoda mabhuku-saka maGoodreads izita rinobhowekana !! Nekudaro, kana iwe uchida kurega mabhuku ako atengeswe zvakanaka saka unofanirwa kuzviita kuti zvionekwe kune vateereri varipo pasirese. Uye, Goodreads ndiyo yakanakisa sarudzo yekuita kudaro! Paunenge wapedza nekugadzira account mu 'Goodreads', kumbira shamwari dzako, vateveri, uye vaverengi kuti vasiye ongororo pane ino saiti uye yekupedzisira asi kwete iyo diki yekuikurudzira kune vamwe vashandisi vewebhusaiti ino.
Shandisa pasocial media kushambadza - Mazuva ano, vanhu vanopedza yakawanda yenguva yavo yemahara vachiri online pamhando dzakasiyana dzezvemagariro enhau senge Facebook, Twitter, Instagram etc. izvo zvinowedzera kuziva kwako uye kuzivisa. Unoda kuziva sei? Zvakanaka, zviri nyore uye zviri nyore! Kugadzira matrailer emabhuku, kugovera zvinyorwa zvemubhuku, kudhirowa ma doodles ebhuku zvechokwadi kwaizoitira zvishamiso kwauri.
Kunze kwezvinhu zvataurwa pamusoro apa zvataurwa pamusoro apa, unofanirwa kuchengeta zvimwe zvinhu zvakasiyana mupfungwa dzako kana uchida kugadzira bhuku rako rinotengesa zvakanyanya. Kufanana, kugadzirisa nekugadzirisazve bhuku rako kwenguva dzakawanda, kushambadzira shanduro kunyange, uine webhusaiti yemunyori, kutumira maemail kune vako vanyoreri, kunyora bhuku rinogombedzera blurb nezvimwe zvichakunyatso kukubatsira kuti uuye pasina chinhu kunze kwekutengesa zvakanyanya. Saka, usamirira zvakare! Ingo tora aya matipi mukufunga, enda kumberi, nyora uye utorese yako yepasirese bestseller ibudiswe munguva pfupi.
Tags: best sellerbestsellerbhukuhunyanzvi hwebhukubhuku rinofukidzakusimudzira bhukugoodreadskutsikisakusimudzira munharaundakunyora bhuku
Sanket Patel ndiye Muvambi & Director we Blurbpoint Media, SEO, uye kambani yekushambadzira yedhijitari. Kuda kwake kubatsira vanhu muzvinhu zvese zvekushambadzira pamhepo kunoyerera kuburikidza nehunyanzvi indasitiri kufukidza kwaanopa. Iye inyanzvi mukushambadzira kweWebhu, Kutsvaga Injini Kugonesa, Yemagariro Media, Kubatana Kushambadzira, Kushambadzira kweB2B, Kushambadzira Kwepamhepo kweGoogle, Yahoo uye MSN.